1Bilatyi, Katy Nomthandazo 1Majola, Fundile Lawrence
1Characters and characteristics in literature 1Creative writing (Higher education) -- Research -- South Africa 1Creative writing -- Fiction 1Short stories, South African -- 21st century 1Short stories, Xhosa -- 21st century 1South African fiction (English) -- 21st century 1South African fiction -- Study and teaching (Higher) 1Xhosa drama 1Xhosa fiction -- 21st century
Ukuzotywa kwabalinganiswa ngokwesithako sobunzululwazi bume-ngqondo kwiincwadi zedrama ezikhethiweyo zesiXhosa, ngokweemeko zale mihla
- Bilatyi, Katy Nomthandazo
Authors: Bilatyi, Katy Nomthandazo
Subjects: Xhosa drama , Characters and characteristics in literature
Identifier: http://hdl.handle.net/10948/9913 , vital:26632
Description: Olu phando luza kugxila kuphononongo lobume bengqondo ephazamisekileyo yabalinganiswa, lujonga kananjalo izimo zabalinganiswa ngakumbi abatsha, indlela abacinga nabenza ngayo izinto. Olu phando luza kuphicotha obu bume bengqondo baba balinganiswa kusetyenziswa iincwadi zedrama ezilandelayo: uBuzani Kubawo, kaTamsanqa, uAmaza, kaQangule, uLiseza kutshona kaMbobo, u-Uthembisa noMakhaya kaMtywaku, Isikhwakhwa noBessie kaMtywaku kunye noNdiyekeni kaJongilanga. Olu thotho lweencwadi zedrama zikhethiweyo luza kusetyenziswa kwakhona ukubhentsisa ubungqondo-lukhuni lwababhali ekuzobeni abalinganiswa abatsha njengoongantweni nolwamvila lolu zobo kwindlela ulutsha oluziphethe ngayo. Olu phando lutshayelelwe ngesahluko sokuqala esiqulathe iingxaki zophando, iinjongo zophando, ukubaluleka kolu phando, okusele kubhaliwe ngophando olu, nalapho olu luza kwahluka khona. Isahluko sesibini sibonisa isithako sobuNzululwazi bume- ngqondo nezinye ezikhaphayo ezifana nenkcubeko apho kujongwa ukuba ingaba inkcubeko ayisetyenziswa na ngendlela ebangela ukuba abalinganiswa abatsha bazibone bekwimo emandla yoxinzelelo. Esi sithako senkcubeko sihambelana neso semo yokuziphatha apha kujongwa ukuba ingaba ukuziphatha kwaba balinganiswa batsha akuqhutywa yindlela uluntu olubabona ngayo bephenjelelwa nayindlela abazotywa ngayo ngababhali. Ezinye izithako ezikhapha esi sobume bengqondo seso sobudala apho kugxilwa kwindlela abajongelwa phantsi ngayo ngenxa yeminyaka yabo luluntu nabazali abaphela bebathathela izigqibo ezikhokelela kuxinzelelo nokuziphatha okungekuhle. Esokugqibela seso seOnomastiki apho kujongwa ukuba ingaba indlela abathiywe ngayo abalinganiswa ayinagalelo kusini na kwindlela oluziphethe ngayo ulutsha. Iimeko zoxinzelelo abazibhaqa bephantsi kwazo abatsha azibangelwa ngamagama abawanikiweyo na nekuye kulindeleke ukuba bawalandele ngenkani nokuba imeko ayivumi. Isahluko sesiThathu sakugxila kwizimo zabalinganiswa ze esesiNe sigxile kubalinganiswa nezigulo zengqondo.